Kuzo zonke izityalo ezomileyo, eyona nto iluncedo i-plunes, njengoko abanye abaphandi bathi. Ukucinywa kwamanzi akukhona nje kuphela umthombo wenani elikhulu lamaminerali kunye neivithamini eziliqela, kodwa uncedisayo ekhatheni kwezifo ezininzi. Ukunciphisa unomthombo omnye ongenakukhunjulwa-kunceda ukunciphisa umzimba.
Iingqungquthela zininzi ngamanzi nee-carbohydrate. Inani elincinci lamafutha, amaprotheni kunye nomlotha. Ngama-grams ayi-grams we-prunes, kukho i-7.1 gram ye-fiber (i-fiber diet). Iingqungquthela ziqulethwe kwinani elikhulu lamavithamini-C, B3 kunye no-E. Eziqhumeni zikhona iivithamini A (beta-carotene) kunye namavithamini zeqela B.
Kule ziqhamo ezomileyo ziqulethe i-macronutrients - i-potassium (nge-100 gr 745 mg), ezininzi ze-phosphorus, i-calcium, i-magnesium. Ngoku, ngokubhekiselele kwizinto ezilandelelanayo, kunokuthi ngokukhuselekileyo ukuba i-prunes iyityebi. Iqulethe nobhedu, i-manganese, i-zinc kunye ne-selenium.
Inyaniso yokuba i-prunes inekhono lokunceda ukulahlekelwa iikhilogram ezimbalwa ngenxa yezizathu ezininzi.
Okokuqala, yinto enesondlo sokutyala. Ngokomzekelo, inani elingu-5 elincinci lomsundu lingagcwalisa isidingo somzimba wefayibha yokutya nge-13%. Kwaye i-fiber iyakuphucula inkqubo yokukhuthaza imveliso esetyenziswa kwinkqubo yokutya. Oku kunjalo, xa ukulahlekelwa sisisindo ngokupheleleyo, akukho miphumo eninzi, ukusetyenziswa kwe-fiber (fiber diet) kubonisa umsebenzi ogqirha, kwaye oku kubaluleke kakhulu. Ngoku malunga nekhalori, i-prunes ayikwazi ukubizwa nge-calori ephantsi, kuba i-100 g yezityalo ezomileyo ilandele malunga ne-239 kcal.
Abantu abaninzi baye bazi ixesha elide lokuba iziqhumane zixhobo ezilungileyo zokuqhaqha. Kodwa okokuqala kwanyatheliswa kuphela ngo-2011. Kule ziqhamo ezomileyo, i-diphenylsatin kunye ne-sorbitol - izinto (i-laxatives zamandla aphakathi), ezinokukwazi ukuthobisa i-stool, zafunyanwa. Ezi zifundo, ingqalelo yamukelwa kuphela e-US, kwaye oogqirha baseMelika benentembelo epheleleyo esele ichongwe njenge-prune laxative. Kanti oku kungcono kunemveliso eluhlaza apho iipilisi ezenziwe khona. Ukongezelela, i-prune isenaso isithunzi - inceda ukususa izinto eziyingozi emzimbeni, kubandakanywa ne-slags.
Ukutyala ukunciphisa ukutya
Abo babesidla, kuyaziwa ukuba ngeli xesha ivakalelo zindlala zomelele ngokwaneleyo, zihlala zitsala into yokutya ikhalori. Kule meko i-plunes iya kuhlangula - isondlo sondlo siphezulu kakhulu kuneekesekese, kwaye umxholo wekhalori uphantsi. Ngaphezu koko, i-prunes ayikhulise kakhulu inqanaba leswekile kwigazi.
Phantse rhoqo, abafazi abanesifo se-dieters baxinezelekile okanye banomsindo. Kwaye kwakhona kuthungula i-scunes kufikelele ekuhlanguleni, njengokuba yinto ephilileyo yendalo. Ngoko ke, ukunyamezela ixesha lokutya okunomsoco kunye neengcungcutye kuya kuba lula.
Izazinzulu zaseGrisi zenze uphando kwaye zabonisa ukuba ezi ziqhamo ezomileyo zinciphisa ukutya. Emva kokutya ukutya okuncinci ngaphambi kokutya, inani lokutya eliya kudliwa liya kuncipha.
Indlela yokukhetha i-prunes
Into yokuqala omele uyihlawule ngayo xa ukhetha ihashe, ngoko kubonakala kwayo. Isiqhamo esomileyo esinjalo, njengesiqhumbuzo, kufuneka sibe sinyanyisa kwaye sibe mnyama. Ukuba izityalo ezomileyo zinomthunzi obomvu okanye obomvu, oko kungabonisa ukuba izithelo ezomileyo zenziwa ngeekhemikhali. Kungcono ukuba ungabathengi kuwo okanye uhlambulule ngokupheleleyo phantsi kwamanzi. Ukunyathelisa kufanele kube lula kwaye ngexesha elifanayo liyanelisekile. Kuthiwa ukutsalwa kweengcungcuthe kugcina emva kokuxinzezela i-dent. I-cherry-flavour kufanele ibe mnandi, izalisekile, imuncu. Iziqhamo azinakudliwa ngongcamango obunzima. Xa kunokwenzeka, fumana apho ezi zinto zifakwe kwizityalo ezomileyo ezivela eCalifornia zona zilungileyo.
Indlela yokutya ngokukhawuleza ngexesha lokunciphisa umzimba
Xa ulahlekelwa isisindo, kufuneka udle izityalo ezi-6 ngosuku ngosuku ngalunye. Indlela enjalo iya kuqinisa umzimba wokhuseleko lomzimba kwaye ulungelelanise umsebenzi weendlela zesisu esiswini. Abo bathanda zonke iindidi zokukhulula iintsuku, imini ingasetyenziselwa ukuguqulwa, isidlo esisodwa kufuneka sidliwe malunga ne-100 grams yeziqhamo ezomileyo, zangaphambili. Ungadla iifilimu zonke iiyure ezingama-2.5-3.
Ukukhulula iintsuku akunakwenziwa ngeesifo sikashukela kunye nokuphazamiseka kwenkqubo yesondlo.
Ukulahleka kwesisindo, iziyobisi ezahlukeneyo kunye nexube nazo zisetyenziswa ngokufafaza. Nazi ezinye iindlela zokupheka zokutya.
Silungiselela iindlela ezidibeneyo zokulahleka kwesisindo, ngenxa yale nto sifuna izi zithako ezilandelayo: amanzi (1.6 ilitha), ama-gram angamakhulu amathathu ama-prunes, ama-gram angama-50 we-buckthorn bark, i-gram i-gram yamaqabunga ama-rose (ungasebenzisa isiliphu esiphucukileyo-i-250ml). Ukutyala kunye ne-barkthorn igcwele amanzi kwaye iphekwe imizuzu engama-25 ngokushisa okuphantsi. Emva kokuba umhluzi ungeze kwi-mhlu, kwaye ubiliswe enye imizuzu engama-45. Emva koko umhluzi uthathwa kwindawo efudumele yobusuku, kwaye ucocekileyo kwaye kwisitya esivaliweyo sihlanjululwa kwisifriji. Umhluzi uthathe isigamu indebe imihla ngemihla nge-21: 00.
Silungiselela umxube onomsoco wobusi kunye neziqhamo ezomileyo zokulahleka kwesisindo. I-formula yesondlo sidinga iimveliso ezilandelayo: i-prune ye-400 g, i-100 g yogqabileyo, i-100 grams yamakhemikhali omisiwe, i-100 g yeziqhamo zasendle (100 grams of hips rose) zingasetyenziselwa indawo ye-hips). Zonke izithako ezitholakalayo zidluliselwa kwi-grinder yenyama, ngoko ubusi bongezwa, umxube uxutywe kakuhle, ubeke kwisitya seglasi, esususwe ukugcinwa endaweni epholileyo. Umxube we-vitamin-nutrient umphumo ungadliwa ngentsasa nakusihlwa kwi-spoon, okanye unokwenza endaweni yeetekese.
Silungiselela umxube onomsoco kuphela nezinye izithako. Ngomxube sithatha iqabunga le-Aleksandriya (enye ipakethe iyadingeka), 200 amagremu obusika omanzi, amagremu angama-400 ama-apricot omisiwe kunye no-400 g weetunes. Zonke izithako, ngaphandle kobusi, sidlula kwisiqhumiso senyama, engeza ubusi uze udibanise yonke into. Umxube obangelwayo ugcinwa endaweni epholileyo. Kufuneka udle ngokuhlwa kwipaspoon.
Isondlo esifanelekileyo sokulahleka kwesisindo: imenyu yokutya yeveki
Iipropati ezisebenzayo ze-turnip
Iziqhamo kunye neziqholo kunye neempawu zonyango
Imveliso efanelekileyo kunye neyingozi kumzimba
I-ukhilimu omnandi ngeeshizi
Yintoni abafazi abathule ngayo?
Umsebenzi wesibini okanye umvuzo ongezelelweyo
Izifundo zokwenza izinto ngeenxa zonke
Inzuzo ecacileyo yowesifazane phambi komntu
I-Cardio-gymnastics, isethi yokuzilolonga
Ukuchaneka njani ukujongana nengxaki yesikhumba?
Ziziphi iimvavanyo okufanele ndizithathe ekucwangciseni ukukhulelwa?
Ndingakwazi njani ukulala ngokukhawuleza, kusetyenziswa izilwanyana zabantu
Ibhotela le-buckwheat kwi-oven microwaves